Taliska Ciidanka Xoogga oo sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen 25 Dagaalame. - XAL DOON
Home NEWS Taliska Ciidanka Xoogga oo sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen 25 Dagaalame.
Taliska Ciidanka Xoogga oo sheegay in Al-Shabaab ay ka dileen 25 Dagaalame.
25 dagaalame oo katirsan Al-Shabaab ayuu talisku sheegay in lagu dilay howlgalkaas inta uu socday, qorshaha waxa uu ahaa ilaalinta nabadgalyada wadada isku xirta Tawakal & Bariiri oo dhowr jeer weeraro Jidgal ah Al-Shabaab ka fuliyeen.
Taliyaha Ururka 4aad Guutada 17aad ee Gorgor Dhamme Nageeye oo la hadlay Warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in howlgalkaan ay uga hortageen xubno katirsan Al-Shabaab oo isku uruursanayay deegaannada la weeraray.
Dhamme Nageeye waxa uu sheegay in howlgallada ka socda Gobolka Shabeelaha Hoose ay sii soconayaan illaa inta ay ka xaqiijinayaan nabadgalyada waddooyinka isku xira Degmooyinka Ciidanka Xoogga Dalka ka joogaan Gobolkaas.